SONSAF | Siyaasada
Halkaan ayaad timid: Home » SONSAF » Siyaasada
Laga soo bilaabo 2008, SONSAF waxay ku howlaneyd sidii ay wax uga qaban lahayd meeqaamyada siyaasada iyada oo kaashanaysa shabakadaha xubnaha ka ah oo ay ka qeygalinaysay hannaanka siyaasada wada hadalka. SONSAF waxaa ay damacsan tahay hubinta sidii siyaasadaha saameeya nabadda iyo horumarka Somaliland ay ku noqon lahaayeen kuwo habboon oo isla markaana ka jawaaba baahida dadka.
Siyaasadaha SONSAF waxaa lagu dajiyaa hannaan wada tashi oo ka dhexeeya xubnaheeda kaasoo ku saabsan arimaha muhiimka ah. Natiijooyinka wada tashiyadaa ayaa noqda asaaska talooyinka siyaasada ay SONSAF u dajiso beesha caalamka iyo hayadaha qaranka.
Qaabka wada tashiga ayaa wuxuu ogolaansho adag ka siiyaa wakiilada SONSAF dhanka siyaasada wada hadaladawuxuuna gacan ka geystaa hubinta sidii xog-haynta iyo guddigu ay u noqonlahaayeen kuwo xil iska saara xubin nimada.